Uma uhlela iholidi ogwini Turkish bese ubheka ngokunethezeka, kodwa hhayi ehhotela eqolo, ke sincoma ukuthi ucabangela Novia Lucida Ibhishi (Camyuva, Kemer) njengokukhethwa kukho efanelekayo.
Ama ifotho, incazelo, indawo
Ihhotela Novia Lucida Ibhishi (Eks. Lucida Beach) lakhiwa 2006. Ngo-2014, Ukulungiswa kwesakhiwo okuphelele kwenziwa lapha. Ihhotela esisogwini olusentshonalanga Mediterranean at unyawo Taurus Izintaba, budebuduze nedolobha resort of Kemer, edolobhaneni Camyuva. Le ndawo ngensimu yehhotela ngokwayo kuyinto 19.500 metres square. amamitha.
Okuyinkimbinkimbi yokuhlala siqukethe 205 amakamelo ehhotela izigaba "ejwayelekile", "Umndeni", "i-suite junior". Bonke zitholakala kule main amane storey izindlu. Igumbi ngalinye has cable TV, ucingo, ephephile (ngenkokhelo), air conditioning, mini-bar, kuvulandi French, kanye nekamelo lokugezela.
Ezokudla kwenziwa ngokuvumelana "ultra-ol okufakayo". Isebenzisa yokudlela main, usebenza lezitsha style, kanye zokudlela "a la Carte", lapho ungakwazi oda à la Carte. inkonzo Maid inikezwa nsuku zonke, ushintsho zelineni kanye amathawula Kwenziwa izikhathi eziningana ngesonto.
It izici yokubhukuda enkulu, spa, zemidlalo, club mini, esitolo nokuningi.
Novia Lucida Beach: Izibuyekezo lezihambi ezivela eRussia
Njengoba wazi, namuhla abantu abaningi kakhulu uma uhlela uhambo ukunakwa kakhulu ikhokhelwa kukhethwa ehhotela. Futhi lokhu kusebenza kuzo zombili amahhotela ezifuywayo kanye angaphandle. Isihambi yesimanje onganelisekile incazelo ehhotela nokuphathwa amathiphu olusemthethweni kusukela inkampani yokulungisela abahambayo, futhi uzama ukuhlola inombolo enkulu kungenzeka ukuphawula labo abaye izithakazelo indawo yayo. Le ndlela ivumela ephelele kakhulu futhi eduze ngokoqobo umbono walokho uzobe elinde wena phakathi iholidi lakho. Phela, akekho ofuna, uyeza eholidini, ukuzwa isimanga edabukisayo. Mayelana nalokhu okunikezwayo wonge isikhathi nomzamo ukucinga futhi simazi kangcono impendulo generalized ngabesizwe yethu, abaphumule ezinhlanu-star hotel-Turkish "Novia Lucido Beach." Ngokushesha kuyafaneleka ukuthi iningi amazwana akhayo, ngoba cishe zonke izivakashi bajabula kakhulu nokukhetha kwethu. Ngokuqondene nemininingwane, ake sixoxe nabo olwengeziwe.
Ngokusho izivakashi kwesokunxele amazwana banikezwe lona Novia Lucida Ibhishi (Kemer) izinombolo cishe zonke wanelisekile. Ngakho, ngokwale ndlela izivakashi, amafulethi abasakwazi ivulekile, kahle ehlotshisiwe, elikhanyayo. Kungokuphawulekayo ukuthi incwadi ukukhanda senziwa ngempela muva nje. Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa futhi ifenisha emakamelweni, ezintsha, zonke zisesimweni ukusebenza. Uma kwenzeke umonakalo abanye, khona-ke ngemva ucingo ukuze inkinga reception ziyoxazululwa ngokushesha ngangokunokwenzeka. Zazingekho izikhalazo ezinkulu maid ehhotela. Ngakho, basuke bahlanza nsuku zonke, restock okugeza kanye zokugeza, futhi okuqukethwe minibar. Selineni kanye amathawula zide. Njengoba kuye kwaphawulwa ukubuyekeza kwabo ezinye izivakashi, ngezinye izikhathi zasemizini ukhohlwe ukubeka amathawula nensipho izimpahla fresh. Kulokhu kwanele ushayele reception, futhi ngokushesha ukuletha yonke into oyidingayo.
Thanda bakithi kanye neqiniso lokuthi ekufikeni abaqondisi benza konke kungenzeka ukuze akufanele awusona eside silindile ngoba izivakashi ufike. Ngakho, lapho ngifika kini ngokushesha wagqoka namasongo wanikela ukuya adle noma ukwenza uhambo cwaningo endaweni. Uma ihhotela has ukutholakala esigabeni ibibhukelwe, uzonikezwa onqenqema cishe ngokushesha ngemva kokufika. Uma kungenjalo ngeke kudingeke ukuba ulinde kuze kube izoya izivakashi esidlule. Kodwa, njengoba kuphawulwe kuzibuyekezo zabo, cishe wonke umuntu ephethwe ukuze kuxazululwe egumbini ungacimi lesibili ntambama, kodwa kuqala emuva impela.
izivakashi abaningi bathi uyazithanda ngempela indawo Novia Lucida Beach Ihhotela 5 * emazwini abo. Ngakho, ngokuvumelana kubo, usehlane, emzaneni kuhle kakhulu ogwini loLwandle iMedithera. Eceleni ehhotela kukhona ukuvakasha, lapho ungakwazi ukungcebeleka eduze kolwandle futhi eziningi nezinye amahhotela.
Ngokuphathelene insimu ka "Novia Lucido Beach ', kuba, nahlulele by ukubuyekezwa ezakhamizi zethu nabo, encane kodwa kakhulu uzilungise, oluhlaza, ehlanzekile ehlelwe kahle. izivakashi Umndeni uthi bahambe ngokuphepha izingane zingagadiwe lapha, njengoba eyayilahlekile umane ndawo.
Umbono mayelana lokudla
Lo mbuzo njalo kubangela impikiswano phakathi nenqwaba izivakashi amahhotela kokubili eTurkey kwamanye amazwe. Nokho, esimweni Novia Lucida Beach Ihhotela, kuhlukile. Ngakho, iningi izivakashi, nahlulele by ukubuyekezwa kwesokunxele kubo, ngamashumi ujabula kakhulu ukudla yehhotela. Bona uqaphele ukuthi yokudlela main uyohlale alindele Ukukhetha enkulu izitsha ezahlukene. Ngakho, lapha ungakwazi ukujabulela isobho izifundo oyinhloko inyama, yenkukhu nenhlanzi, side izitsha, kanye ukudla okulula, kanye salads, nokunye okuningi. Ekuseni, kukhona njalo oatmeal, okusanhlamvu, amaqanda kuphekwe ezahlukene izindlela, pancake, crepes, sezimoto nokunye. D. Njalo etholakalayo nezithelo ezintsha kanye amaswidi. I ethile kuphela, ngokuvumelana bezwe kwethu, kwakuwukuthi kwakungekho anhlobonhlobo ezifana nama-dessert Turkish, owawuthandwa kakhulu izivakashi eziningi. Nokho, ziyisici ngokugcwele ababeyozijabulela kusihlwa Turkish, lapho yokudlela ukhonza cuisine bendawo nezivakashi basuke ubungazwa nemidanso bendabuko kanye nomculo.
Abaningi izivakashi e ukubuyekeza kwabo bathi pizza esihlwabusayo kakhulu futhi izitsha ezifanayo, okuyinto emini Ungahlala eziyojatshulelwa kubha isidlo. Ngaphezu kwalokho, izivakashi uyakhuthazwa ungalahlekelwa ithuba luphathwe-ayisikhilimu ibha endaweni yokwamukela izihambi. Ezinye izihambeli futhi bajabula lapho Akhumbula isikhathi emnandi Sekudliwa, lapho 8 ebusuku umpheki athathe omkhulu u-ayisikhilimu ikhekhe.
Izivakashi ukuhamba ngenkathi ukugeza ogwini Turkey, udaba ingaphezu efanele. Ukwahlulela ngokubukeka amazwana bakithi, Novia Lucida Beach Ihhotela, ningaqiniseka ukuthi omkhulu lolwandle iholide. Ngakho, ibanga kusuka ehhotela kolwandle kuphela ambalwa engamakhulu amamitha. Itshana lolwandle lapha. Setha emanzini efanayo. Futhi kuya ukujula ukuthi kudingeka uhambe a amamitha ambalwa, ukuze izingane nabantu abangakwazi ukubhukuda, kuyoba ukhululekile. izivakashi eziningi e Izibuyekezo zabo ziye zaphawula ukuthi amanzi, ngisho eduze nogu uhlanzekile kakhulu. Ungabona ngisho nezinhlanzi ezincane, ukuthi futhi silwele ngobumnene luma nawe emlenzeni. Ngokusho izakhamizi, injabulo lena akuyona buhlungu, kodwa kunalokho emnandi. pier siqu ehhotela lapho. Kodwa izivakashi eziningi ukujabulela pier lokubhukuda ehhotela elaliseduze "Xena."
Kepha ebhishi, kukhona inombolo ezanele emphemeni izihlalo kanye ilanga izambulela. Futhi akudingeki ukuba kuthathe ekuseni, njengoba ilanga Imibhede esanele ukuze yonke comers. Bichboy uyojabula ukuhambisa lounger njengoba ukhululekile. By endleleni, abanye beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni imibono aveze ezikuthandayo ukuba aqambe amanga ngqo amatshe, ithawula embhedeni. By the way, nge ebhishi umbono omuhle: ngakolunye uhlangothi kolwandle azure, futhi ngakolunye - ehhotela kanye izintaba zakhona ezinhle. abahambi Abaningi ziyajabula wazi ukuthi kukhona ihlale ihlanzekile. Phela, ebhishi is hhayi kuphela isethwe ku inqwaba amabhokisi, kodwa futhi basebenza ngokuzikhandla wezindlu.
lokususa Small ezinye izivakashi kubhekwe iqiniso lokuthi amathawula ukusebenziswa net kungenziwa umklomelo isikhathi zingavumi kakhulu (8:30 kuya 10:30). Nokho, izivakashi eziningi ongathanda nethuba bashintshisane amathawula ntambama, endleleni esuka ebhishi ekamelweni.
izivakashi eziningi zokudumisa ngempela ekhona ensimini ka Novia Lucida Ibhishi (Turkey, Kemer), a yokubhukuda ezinkulu. It ifakwe ezahlukene kwesigaba ukujula amaslayidi ezifakiwe. Ngakho ukuphumula lapha can kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Eduze ifakwe ilanga ithala amaningi sun bed. Nokho, ngokuvumelana izakhamuzi zethu nabo, cishe yonke sunbeds ehhotela izivakashi ukuthatha ekuseni. Ngesikhathi esifanayo ngasechibini ngesikhathi abantu usuku akudingeki kakhulu. Kukhona ibha nge Ukukhetha enkulu iziphuzo kanye Ungadla.
Usuku lonke e-izivakashi zehhotela ubungazwa Animators. Bona ngobumnene okunikelwe zonke comers aerobics, amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela, sinyathelo, i-yoga, zumba umdanso, kyokushin nomoya sokuzingela, ukuba azibandakanye kumnandi imincintiswano futhi-volleyball yasolwandle noma imicibisholo.
Kusihlwa, izivakashi yehhotela ukuzijabulisa imibukiso. Lokhu kwenziwa njengoba amabutho Animators kanye guest Abaculi. Ngemva kombukiso uya disco gay.
izivakashi Umkhaya bathi ihhotela Novia Lucida Beach 5 * (Kemer, Camyuva) zonke izimo ngemindeni nezingane. Ngakho, emini izivakashi abasha ujabulele club mini, lapho uphiwa kumnandi ezihlukahlukene nemisebenzi ngokuhambisana ubudala babo. Kusihlwa, izingane labetibambile mini-disco. Futhi phakathi nesimiso show abadala nezingane ukunikela nokuveza iwashi opopayi, sikwazi abazali ukuba uphumule. Njengoba izivakashi umndeni uthi ebaleni lokudlala izingane kakhulu esayithini, futhi khona etafuleni sezingane yokudlela.
Ngokombono izakhamuzi zethu nabo, cishe bonke abasebenzi "Novia Lucido Beach" ehhotela ufanelwe udumo. Phela, nabo basuke zihlale zilalele izivakashi futhi ubhekana yemfanelo yayo. Ngakho, ngokwesibonelo, ngokuvumelana izivakashi yokudlela awusoze ubona ithebula ezingcolile. Phela, oweta zihlale ngesikhathi esifanele ehlanzekile izitsha. Futhi, bakithi emazwini abo ukugqamisa ukuthi eziningi abasebenzi ehhotela ukukhuluma ngesiRashiya. Ngakho ukuthi ubunzima zokuxhumana wena ungekho.
Nokia 5310 Xpressmusic: Ukucaciswa kanye nokubuyekeza